Safal Khabar - मुद्दाको फैसला आउन भने अझै लामो समय लाग्ने
मुद्दाको फैसला आउन भने अझै लामो समय लाग्ने
सोमबार, १८ कार्तिक २०७६, १६ : ३८
काठमाडौँ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको जवरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दामा सोमबार पनि थुनछेक बहस चलिरहेको छ । बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध जवरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा दायर गरेपछि शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले महरासँग बयान लिएको थियो ।
त्यसपछि आइतबार सरकारी वकिल पक्षका ४ जनाले वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महराको अभियोग पुष्टि गर्ने प्रयासस्वरुप बहस गरे ।
आइतबारै महराको तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ता लवप्रसाद मैनालीले पनि बहस गरे । यद्यपि समय अभावका कारण सबै अधिवक्ताले बहस गर्न नपाएको कारण आइतबार महराविरुद्धको थुनछेक बहस सकिएन र थुनछेक बहस सोमबार पनि जारी नै रहेको हो ।
सोमबार महराविरुद्ध भएको बहस उनलाई थुनामा नै राख्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने विषयमा मात्रै हो । मुद्दाको फैसला आउन भने अझै लामो समय लाग्ने नै छ ।
महरामाथि ‘जबरजस्ती करणीको प्रयास’ गरेको आरोप लगाउने महिला (नयाँ बानेश्वर २६) ले मिडिया तथा प्रहरीमा पटकपटक फरकफरक बयान दिएकी छिन् । उनको बयान फेरिँदा अब अदालतले के र कसरी फैसला गर्ला भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ ।
कतिपयले पीडित महिला ‘होस्टाइल भएको’ अर्थात् बिकेको, धम्काएको आदि बताइरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ महिलाको मानसिक अवस्था स्वस्थकर नरहेको कारण ययरी बयान फेरिरहेको बताएका छन् ।
पूर्वसभामुख महराको क्षेत्रका मतदाताहरुमा खुसी, आज तुलसीपुरचोकमा दीप प्रज्वलन
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले सफाइ दिएपछि उहाँको निर्वाचन क्षेत्र दाङका मतदाताहरुले खुशीयाली मनाएका...
महराले सफाइ पाएपछि उनका वकिलले भने– ठूलो डिजाइनअनुसार फसाइएको थियो
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका वकिल नेपाल बार...
महरा प्रकरणमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने–महराले गल्ती गरेकै हुन्
यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको बन्द इजलासमा महराको बयान सुरु
संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको...
१. रद्द भयो सहसचिवको नतिजा
२. इन्स्टाग्रामको कमजोरी पत्ता लगाउँदा यी नेपालीले पाए ६ हजार डलर पुरस्कार
३. अब आधा घण्टामै कोरोनाको रिपोर्ट
४. आयुर्वेदिक अस्पतालमा कोरोनाको उपचार, ७ दिनमै निको भए सङ्क्रमित
५. सर्पको डसाइबाट मृत्यु
६. भदौ १ गतेदेखि उद्धार उडान हुने
७. अमेरिका र चीनबीच महामारीबीच व्यापार सम्झौताबारे छलफल
८. २५ बैंकको विवरण सार्वजनिक : नाफा घट्यो
९. एक लाखभन्दा बढी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी